Zombie Smartphones. Antony marim-pototra ve izany? & Ndash; Semalt Point Of View
Zombie Smartphones. Antony marim-pototra ve izany? - Semalt Point Of View
Nahomby ireo hackers sy spamers tamin'ny famoronana tamba-jotra tamba-smartphones. Misy ny fahafaha-mitondra ny fitaovana ampiasainao amin'ny findainao raha tsy fantatrao ary mety hamoy ny angon-drakitra tsy ho ela. Ny Botnets dia voalaza fa nisy fiantraikany tamin'ny ordinatera sy finday maro tato anatin'ny volana vitsy. Ross Barber, manam-pahaizana Semalt , dia milaza fa ny mpitsikilo sy ny hackers dia manandrana mamitaka ireo mpampiasa finday amin'ny fomba iray na ny iray hafa ary adala mba hanangonam-bola. Anjatony an'arivony ny milina mampiasa rindrambaiko botnet manerana izao tontolo izao, ary maro amin'ireo tranga ireo no voalaza fa any Etazonia. Soa ihany, tsy nisy tranga nateraky ny botnet amin'ny finday nambara hatramin'izay. Ny orinasam-pifandraisana Symantec dia manana foibe ao Kalifornia. Ny manam-pahaizana amin'ity orinasa ity dia milaza fa ireo programa fantatra amin'ny hoe Space Space dia ireo boka ratsy novokarin'ireo mpikirakira ireo mpampiasa smartphone.
Hafatra tsy voaaro
Mametraka hafatra an-telefaona amin'ny mpampiasa marobe ny Space Espace, manintona azy ireo amin'ny zazavavy mafana sy tsara tarehy amin'ny aterineto. Ny hafatra dia ahitana rohy, ary io tovovavy io dia mangataka anao mba hijery ireo rohy mba haka ny sariny farany. Raha tsindrio ireo rohy ireo ary alefaso any amin'ny namanao ny hafatrao, dia mety haka ny fampahalalana sy ny mombamomba ny findainao voatahiry ao amin'ny smartphone anao..
Maro ny viriosy SMS nalefa ho an'ny mpampiasa manerana izao tontolo izao, fa ny Space Space dia loza mitatao tsy mahazatra sy vaovao izay mifandray amin'ny serivisy foibe ary mifehy ny asa ataon'ireo fitaovana elektronika sy finday maro. Ny hackers dia maka ny fanaraha-maso ny smartphone, mamelatra botnets ao aminy ary mamorona fako ho anao. Raha toa ny tambazotran'ny finday smartphones dia mamaly amin'ny baiko an-dalambe, dia antsoina hoe botnets marina izany.
Ny talen'ny Syphanc momba ny fiarovana Zulfikar Ramzan dia milaza fa tsy misy ny fampahalalana mikasika ny fomba fiasan'ny Sexy Space sy ny fomba itondrany ny smartphones manerantany. Saingy ny zavatra iray iombonana amin'ny fitaovana rehetra dia ny manova azy ireo ho botnets mobile
Ny fandrahonan'ny tambajotra
Nilaza i Ben Feinstein avy amin'ny "Secure Works" fa ny PC sy ny smartphones dia niova ho botnets isan'andro. Miasa toy ny injenieran'ny solosaina izy, ary ao Georgia no misy ny orinasa. Ny botnets mobile dia mety miteraka fandrahonana goavana amin'ny mpampiasa amin'ny hoavy. Ohatra, manaporofo ny manam-pahaizana fa afaka manala ny ampahany amin'ny smartphone ny spam mba handefa azy amin'ny hafatra tsy misy dikany. Ny fitaovana iray eo amin'ny infection dia ampiasaina hanovana ny angona ao anaty tambajotra anaty ordinatera. Ekipa iray manam-pahaizana ao amin'ny Errata Security dia nanambara fa ny mpikoka dia manakona ny iPhones amin'ny alalan'ny hafatra amin'ny Space Espace. Ity orinasa ity dia miasa ao Atlanta ary manana ny biraony sy sampana manerana izao tontolo izao. Ny ekipa manam-pahaizana mitovy ihany koa dia miteny fa ny iPhones voavono dia ampiasaina hanovana ny fotodrafitrasa amin'ny tambajotra WiFi. Na dia efa nametraka programa iray antibiotika aza ianao, mety tsy ho afaka hiaro ny fitaovana findainao ianao raha manomboka amin'ny endrika hafatra ny spam; ary ny hafatra dia tsy azo sakanana raha tsy manidy ny ID ny mpanolotra. Ny rafitra Wireless sy fitaovana ordinatera ao an-toerana ihany koa dia voan'ny virosy. Ny hacker mpanao heloka bevava dia afaka mampiasa ny Space Espace mba hialana amin'ny tambajotra anaty orinasa Source .